မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: April 2011
Burmese community in Oakland joined Burma signature campaign
ဥက္ကလံမြို့ မြန်မာမိသားစုများသင်္ကြန်ပွဲတွင် အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး ပန်ကြားလွှာ လက်မှတ်ထိုးမိုးမခဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၁၊ ၂၀၁၁ယမန်နေ့က အမေရိကန်ပြည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဥက္ကလံမြို့ မြန်မာမိသားစုများ၏ ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် မြန်မာပြည်သူတို့၏ ပန်ကြားလွှာ လက်မှတ်များ စုပေါင်း ရေးထိုးသည့် အစီအစဉ်ကို ထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာအခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းများက ၀ိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကူညီကြသည့် အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုတွင် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ မြန်မာမိသားစုများက မြန်မာပြည်သူတို့နှင့်အတူ ရပ်တည်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ လက်ရှိပွဲတော်လာ ဧည့်ပရိသတ်များအတွင်းက မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားသူ၊ လှုပ်ရှားသူ ဦးရေ ၂၀၀ နီးပါးက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်ဟု စီစဉ်သူတဥိးက ပြောကြားသည်။ အင်န်အယ်ဒီပါတီ၏ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် ဦးမောင်မောင်လတ်နှင့် ဦးဝင်းလှိုင်တို့ကလည်း လူထုနှင့်အတူ ရပ်တည်အားပေးမှုများ ပြုခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ (ဓာတ်ပုံများ - ပွဲတော်တွင် မြင်တွေ့ရသည် မြန်မာများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ)
Reactions: SF Burmese Community call for signature campaign this weekend
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာပြည်သူတို့၏ လက်မှတ်ထိုး ပန်ကြားလွှာတွင် ပူးပေါင်းလက်တွဲကြမည်။လက်မှတ်ထိုးမည့်နေရာများ (၁) နေ့စွဲ။ ။ Saturday, April 30, 2011 (10:00am - 4:00pm) နေရာ။ ။ ဥက္ကလံမြို့၊ မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲတော်။Cesar E. Chavez Education Center, 2825 International Boulevard = (E 14 St.), Oakland, CA.ဆက်သွယ်ရန်။ ။ ကိုအောင်ဇာနည်(၆၆၁ ၃၄၅ ၇၉၃၅)၊ မခင်သီရီန္ဒာစိုး(၆၅၀ ၇၅၈ ၁၂၉၀)။(၂) နေ့စွဲ။ ။Sunday, May 1, 2011 (3:00pm- 6:00pm)နေရာ။ ။ မြန်မာပြည်ကို ကူညီကြစို့(Project Help Burma) စေတနာရှင်နှင့် လုပ်အားပေးသူများ တွေ့ဆုံပွဲ။540, 23rd Street, Oakland, CA 94612.ဆက်သွယ်ရန်။ ။ မအေးရီဌေး(၅၁၀ ၇၁၂ ၄၉၄၆)၊ ဦးမောင်မောင်လတ်(၅၁၀ ၅၃၃ ၆၄၂၄)။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာပြည်သူတို့နှင့် အတူ မိမိတို့က တထပ်တည်း တသဘောတည်း ရပ်တည်ကြောင်း ပြသရန် ယခု လက်မှတ်ထုိုးပန်ကြားလွှာတွင် လက်တွဲကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။(၁) အင်န်အယ်လ်ဒီ (လွတ်မြောက်နယ်မြေ၊ ယူအက်စ်အေ)(NLD-LA-USA)(၂) မြန်မာ့ကျောင်းသားများ အစည်းအရုံး(San Francisco Bay Area,USA)(၃) မြန်မာအမေရိကန် ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (BADA)(၄) မြန်မာအမေရိကန် အမျိူးသမီး မဟာမိတ်အဖွဲ့ (BAWA)(၅) သုံးရောင်ခြယ် (ယူအက်စ်အေ)(၆) မိုးမခ မီဒီယာ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ။(၇) Human Rights Human Light (City College of San Francisco) အောက်ဖော်ပြပါနေရာတွင် ဧပြီလ(၁၇)၊ ၂၀၁၁ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စုဆောင်းရရှိ တင်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော ပြည်သူတို့၏ လက်မှတ်ထိုး ပြန်ကြားလွှာမိတ္တူများကို ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။http://moemaka.net/albums/userpics/10001/BurmaSignatureCampaign2011.pdfဤနေရာမှာ မိမိတို့ ရောက်ရှိရာ နိုင်ငံ၊ မြို့နယ်အတွင်း လက်မှတ်ထိုးရန် ဖောင်များ ပုံနှိပ်ထုတ်ယူရန် ပုံစံကို ရယူနိုင်ပါသည်။
http://moemaka.net/albums/userpics/10001/Pages_from_Signature_Campaign.pdf အောက်ဖော်ပြပါ နေရာကတဆင့် အွန်လုိုင်းလက်မှတ် ထိုးနိုင်ပါသည်။
Reactions: two set of deiiferent 11 group with2set of different demand
နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၁ ပါတီက စီးပွားရေး အခွင့်အရေးများ တောင်းချိန်တွင်မြေအောက်လှုပ်ရှားသည့် အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို တောင်းဆိုမိုးမခ အထောက်တော်၊ ရန်ကုန်ဧပြီ ၃၀၊ ရန်ကုန်ပြည်တွင်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၁ ပါတီစုပေါင်းပြီး ဥရောပ သမဂ္ဂအား အကောက်ခွန် လျော့ပေါ့ခွင့်ပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံချိန်တွင် လျှို့ဝှက်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ ၁၁ ဖွဲ့ကလည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးလွှတ်ပေးရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းခြမ်းရေး တို့ကို အရပ်ဝတ် အစိုးရအားတောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူထားခြင်းကို သက်တမ်း တစ်နှစ် ထပ်မံတိုးပြီး ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အကြာတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၁ ပါတီက ကုန်သွယ်မှုပြုရာတွင် အထွေထွေ သက်သာခွင့်ရ နိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံအား ပြန်လည်ထားရှိပါရန် ၂၈ ရက်နေ့နေ့စွဲဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အထွေထွေသက်သာခွင့်ကို ပြန်လည်ထားရှိပေးခြင်းဖြင့် အသေးစား အလတ်စား လုပ်ငန်းများ အကျိုးရှိနိုင်ပြီး သာမန်ပြည်သူများအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်မည်ဟု အဆိုပါ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေများ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများက ဆိုသည်။ သို့ရာတွင် အရပ်ဝတ် လဲလှယ်ထားသည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်အများစုပါဝင်သည့် အစိုးရသစ်အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်မည် မပြုလုပ်မည်ကို အဆိုပါ ၁၁ ပါတီအနေဖြင့် အာမခံနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ အထက်ပါ ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေများ အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ပါတီတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုတက်ရေး၊ ဝံသာနု NLD ၊ ချင်းအမျိုးသား၊ ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်နှင့် အမျိုးသား မဟာမိတ်များ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီတို့ဝင်သည်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့၊ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ရက္ခအလင်းတန်း၊ Saffron Generation ၊ ၂၀၀၇ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ အစရှိသည့် မြေအောက်လှုပ်ရှားသည့် အဖွဲ့ ၁၁ဖွဲ့က ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သည့် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအဖွဲ့ကို သုံးသပ်ချက်နှင့် အတူ နိုင်ငံရေး အကျဥ်းသားများအားလုံး ချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ မြေအောက်လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ ၁၁ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက်တွင် ယခုအသစ်ဖွဲ့စည်းသည့် အစိုးရသစ် အဖွဲ့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင် ၃၅ နေရာအနက် ၂၆ နေရာကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများက ရယူထားပြီး ကျန်နေရာများအား ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်များက ရယူထားခြင်း၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ ၀န်ကြိးချုပ် ၁၄ နေရာအနက် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း နှင့်လက်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်များက ၁၀ နေရာ ယူထားပြီး ၄ နေရာကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်များက ရယူထားခြင်း၊ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီဝင် ၁၀ ဦးတွင်လည်း ၉ ဦးမှာ လက်ရှိဗိုလ်ချုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ ဖြစ်ကာ ကျန်တစ်ဦးမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင် ဖြစ်နေသည့် အချက်တို့ကိုထောက်ပြထားသည်။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: US Embassy post advisory on DV lottery announcement
ရန်ကုန်ရှိအမေရိကန်သံရုံးက ဒီဗီမဲစနစ်အကြောင်း ပြန်ကြားစာထုတ်ပြန်မိုးမခထံပေးစာ၊ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၁မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်သို့ ပြောင်းရွှေခွင့် မဲလျှောက်ထားသူများအထဲက မဲပေါက်သူများ ကြေငြာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး လိမ်ညာမှုများ၊ မသမာမှုများ ဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်ရန် သံရုံးက ပြန်ကြားစာထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အဆိုပါ ဘာသာပြန်ကို လက်ခံရရှိသည့်အတိုင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
Dear American citizens, ခင်မင်ရပါသော အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ ခင်ဗျာ *The U.S. Department of State will announce winners of the 2012 Diversity Visa (DV) Program starting on May 1, 2011. * The *only* means by which selectees may find out if they are selected for DV 2012 will be via the Department of State’s Electronic DV Entrant Status Check Web Site: www.dvlottery.state.gov.လာမဲ့ *မေလ (၁) ရက် ၂၀၁၁* နေ့မှာ အမေရိကန် DV ပေါက်မဲဆုရှင်များကို ကြေငြာပါမယ်။ လျှောက်လွှာရှင်များ မိမိတို့ ၂၀၁၂ DV program မှာ ရွေးချယ် ခံရ မခံရ ကို www.dvlottery.state.gov ထဲမှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ Please be sure to have the entrant's *Confirmation Number,* *Last Name/Family Name, *and *Year of Birth *in order to check the entrant status online. လျှောက်လွှာတင်သူက မိမိလျှောက်လွှာ မှာရေးသားဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့ Confirmation Number, မိမိအမည် last name/family name, မွေးသက္ကရာဇ် (လျှောက်လွှာမှာ ရေးသား ထည့်သွင်း ထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျ) ဖေါ်ပြလျက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ If you are selected asaDV winner you must respond by following the instructions on the Entrant Status Check Web Site. After responding you will receive follow-up instructions from the State Department about processing your case to completion. U.S. Embassy Rangoon will not be providing these follow-up instructions. ပေါက်မဲရှင် (DV Winner) အဖြစ် အရွေးခံရကြောင်း သိရလျှင် Entrant Status Check Web Site မှာပေးထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာလျက် အွန်လိုင်းမှပင် အကြောင်းပြန်ကြားပါ။ အကြောင်းပြန်ကြားပီးရင် တော့ အမေရိကန် State Department က အပြီးသပ်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမဲ့ ကိစ္စ ရပ်တွေအတွက် ညွှန်ကြားချက်များရပါလိမ့်မယ်။ ရန်ကုန် အမေရိကန်သံရုံးက ဒီ အပြီးသပ်ဆောင်ရွက်ရမဲ့ ညွှန်ကြားချက်များ (follow-up instructions) ကို ထုတ်မပေးပါဘူးတဲ့။ Currently, many DV applicants in Burma and around the world are receiving fraudulent emails notifying them that they have won the DV lottery.ခုခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် တကမ္ဘာလုံး က DV လျှောက်လွှာရှင်တွေ ဟာ မမှန်မကန် အီးမေးလ်တွေ လက်ခံရရှိနေကြတယ်။ အဲဒီ အီးမေးလ် တွေထဲမှာ လိပ်စာရှင်တွေဟာ DV ပေါက်ပြီလို့ လိမ်ညာထားကြပါတယ်။ *Please note that those selected in the random drawing will NOT be notified of their selection by email or regular mail.* *Also, entry in the DV program is free! Selectees are not required to send money to find out if they have been selected. *သတိပြုရမှာက ရွေးချယ်မှုဟာ random စံနစ် ဖြစ်သလို ဘယ်သူ့ ကိုမှ ရွေးချယ်ခံရကြောင်းကို e-mail ဖြင့် သော်လည်းကောင်း ပုံမှန်စာတိုက်မှ သော်လည်းကောင်း လုံးဝ (လုံးဝ) ပေးပို့ခြင်း မပြုပါ။ DV program ဟာအခမဲ့သာ ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောလိုပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရသူများ ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ငွေပေးပို့ စရာမလိုပါ။*When the State Department announces DV winners on May 1, 2011, it will not chargeafee for that information. We caution all not to send money to anyone asking for it from an unsolicited email. DV ပေါက်မဲများကို State Department က မေလ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၁ မှာ ကြေငြာတဲ့အခါ မည်သည့်အဖိုးအခမှ မယူပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ဆီကိုမှ၊ ဘယ်လိုတာဝန်ယူလုပ်ပေးပါ့မယ်လို့ ပြောတဲ e-mail ဆီကိုမှ *ငွေပို့မပေးဖို*့ ကျနော်များ သတိပေးလိုပါတယ်။ For more information about the DV notification process, please visit: http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html ဒီထက်မက ပိုသိချင်ပါသေးရင်တော့ ဖေါ်ပြပါ လိပ်စာမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html Please pass the word to your friends and colleagues! Those with further questions should feel free to visit the Embassy website or the Consular Section’s Facebook page or email us at ConsularRangoon@state.gov. Embassy Website: http://burma.usembassy.gov/visas.htmlConsular Section Facebook Page: http://www.facebook.com/pages/US-Embassy-Rangoon-Visa-Section/164487086904429 သင့်မိတ်ဆွေများ နဲ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များကို လက်ဆင့်ကမ်း သတင်းပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ထပ်မံသိလိုတာတွေရှိသေးရင် အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးရဲ့ ကောင်စစ် ဌာန (Consular section) ရဲ့ website သို့မဟုတ် facebook စာမျက်နှာ ကို ၀င်ရောက်မေးမြန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Embassy Website: http://burma.usembassy.gov/visas.html Consular Section Facebook Page: http://www.facebook.com/pages/US-Embassy-Rangoon-Visa-Section/164487086904429ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လဲ ကောင်စစ်ဌာန ကို အောက်ပါ e-mail ဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း
ConsularRangoon@state.gov. Sincerely yours,Consular SectionU.S. Embassy Rangoon110 University Avenue Rangoon, Burma Email: consularrangoon@state.gov